Warbixin ku saabsan qaabka iyo xaalka Ilmo buuxin rabo da’ada 18 ka ama buuxiyay dhawan ama bilaha soo socdo.
Waad salaamantihin dhaman,
Sida aad wada ogtihiin xalada deg dega ah ee Covid-19 waxbadan oo noloshena caadiga ah aha ayaa isbadalay. Gaar ahaan qaarkiin waxaad weysee ama is dhimay Iskuuladi, Tiroshiiniyada, shaqooyinki, Cusbooneysiinti sijoornada oo aad isku dhimay.
Hadii aad u bahato cawimaad ama warbixin weydii:
Qofka kaa masulka ah
Shaqalaha kaamka aad ku noshahay
Ururada sacida (sida ARCI) hadi adan kaam ku jirin.
Halkaan waxad ka heli karta warbixin ku anfici karto:
Waa maxay cawimad nolol dhis?
Waa mid ka mid ah caawimada eey Talyaniga siiso caruurta anan heysan waalid ama masuul , kuwaas oo qaan gaaray ama qaan gari rabo si eey usii wataan noloshooda iyo dhex galka bulshada una dhistaan nolol isku filan,lana caawiyo inta eey ka garayaan da’ada 21 ka.
Yaa iska leh caawinadas?
Waxa leh dhaman ilmaha qaan gaari rabo ee 18 galay ama gali rabo ee heysto sijoorno da’ayarta ah.
Yaa Diraayo codsiga Saacidaad marka qaan garto?
sooshalka kamuunka aad dagantahay ayagoo kashanayo shaqalaha kamka.
FGHadii aad dhib ku qabto ama laguugu saacidi wayo waxaad la xiriiri karta ururada (Sida ARCI) si eey kaga saacidaan in aad codsigada toos u geysato maxkamada caruurta
Sidee lagu dalban kara caawimaad marka qan garto?
Waxaa loo maraa maxkamada caruurta(waxa jiro warqado la buux buuxiyo onlinekana waka helikartaa)
Shaqalaha soshalka waxeey weydiinayaan maxkamada ilmaha in eey kuu ogolato in laguu kordhiyo waqtiga aad kusii jiro karto xarumaha laguugu caawinayo si aad ugu gaarto inta aad ka xiureyso kow iyo labadanka sano mustaqbalna aad u dhisato.
Halkee loo dira codsiga kasii id ahanshaha dadka cawinada rabo?
Waxa loo dira maxkamada caruurta mamulkeda
maxkamda si toos ah
Marka aad buuxin rabto 18ka sano
Maxeey noqon karta jawabta an helayo?
Maxkamada waxey kuso go’amineysa in eey Soshalka kusi hayan inta aad kow iyo labtanka sano ka gaareyso.
Hadii eey isoo diidaan maxan sameyaa?
Waxaan kugula talineyna in aad la xiriirto shaqalaha kaamka ama qofka ka masuulka ah.
Hada oo eey xalada qasan tahay mala diri karaa codsiga ?
Haa laakiin mar walba la xiriir shalaha kamka ama qofka ku haayo.